Iintakumba kwiikati | Amakati eNoti
UMonica sanchez | | Izifo, Amaqhinga
Kuzo zonke iiparasites ezinokuzikhathaza iikati zethu, ngokungathandabuzekiyo zi iintakumba. Ezi ntshaba zincinci zezilwanyana zethu ezinoboya zivelisa ngokulula nangokukhawuleza, ke ukuba azilawulwa ngexesha, sinokuba nesibetho, kungekuphela nje kwizilwanyana, kodwa nasekhaya.
Ngenxa yekati yakho, kunye neyakho, enye yezinto ekufuneka zenziwe, ngakumbi kwiinyanga ezishushu, yintshulube ukufaka ipayipi okanye isibulali zinambuzane ukuyikhusela. Kwaye kukuba iintakumba kwiikati zingasibangela iingxaki ezininzi esinokuthi sizisombulule namaqhinga endikunika wona kwesi sikhokelo. Yintoni egqithisile, uya kufunda ukwenza izinambuzane zendalo, eya kuba luncedo kakhulu ukuba uboya bakho abuchasene neepipettes zamachiza kunye nezitshizi.
1 Yintoni intakumba?
1.2 Umnqa wobomi
2 Izifo ezinokubangela
3 Ndingazi njani ukuba ikati yam inentakumba?
4 Uthintelo lweFlea kwiikati
4.1 Imichiza yokubulala izinambuzane yokulwa iintakumba kwiikati
4.1.2 Imigexo yomqala
4.1.4 Isitshizi se-Antiparasitic
4.2 Inambuzane yendalo
4.2.1 Unyango lwasekhaya lweentakumba kwiikati
4.2.1.2 Igwele lebhiya
4.2.1.3 Iti yomthi ioyile ebalulekileyo
5 Amava am
Ukulwa ngcono isibetho, kuyacetyiswa ukuba usazi kakuhle. Ngale ndlela kuya kuba lula kuthi ukubona iindawo ezibuthathaka kuzo, kwaye singaqhubeka nokwenza unyango lokuthintela ikati yethu ngexesha elifanelekileyo. Xa sele nditshilo, Ngaba siyazi ngokwenene ukuba yintoni intakumba?
Iintakumba zizinambuzane ezincinci (ezimalunga ne-3mm ubude), ngaphandle kwamaphiko, ezizezomyalelo weSiphonaptera. Zondla kwigazi lezilwanyana ezanyisayo ngokubulela kumatshini womlomo owenzelwe ukufunxa igazi lezilwanyana, kwaye ngokungathi oko akwanelanga, phantse iintlobo ezingamawaka amabini ziyaziwa kwihlabathi liphela. Ukongeza isithuko ebubini, ezinye zazo zihambisa izifo ezoyikekayo njengesibetho se-bubonic, typhus okanye tapeworm. Banombala omnyama, umzekelo abo bahlupha iikati babomvu ngombala.
Imilenze yayo inde, ikulungele ukwenza ukuxhuma okukhulu (ukuya kuthi ga kwi-34cm kwicala elithe tyaba, kunye ne-18cm kwicala elithe nkqo). Kungoko, isilwanyana esinokuhamba umgama omde ngokutsiba kube kanye ngokobungakanani baso. Kwaye ekubeni umzimba wayo ucinezelwe ecaleni, inokuhamba ingabonakali ngoboya bomninimzi.
Iintakumba zizinambuzane ezinomjikelo wobomi wazo ongafaniyo, kwaye Imveliso kakhulu. Ukusukela xa bengamaqanda ukuya ebudaleni, kungathatha iiveki ezimbini kwiinyanga ezishushu, ukuya kuthi ga kwiinyanga ezisibhozo ukuba imozulu iyabanda. Amabhinqa abeka amaqanda angama-20 ngendlela engaqhelekanga usuku ngalunye emva kokondla; kubomi bakhe bonke uya kube ebeke malunga nama-600, eza kutyhoboza kwiintsuku ezili-10 emva kokubekwa.
Ngelixa izibungu, azibangeli kungonwabisinjengoko bengafunisi igazi. Batya kuphela iinwele ezifileyo kunye nolusu, ilindle labantu abadala kunye nokunye ukungcola. Kodwa kwiintsuku nje ezimbalwa baya kuba ziipapu, kwaye baya kukhuselwa kwiicoco zabo ngelixa befikelela kwinqanaba labadala kwiintsuku nje ezili-14 ukuba imozulu intle; Ngaphandle koko, oko kukuthi, ukuba kusebusika kwaye amaqondo obushushu ahlala engaphantsi kwe-10ºC, baya kuwusebenzisa njengombungu okanye umphunga, kwaye ngentwasahlobo baya kugqiba ukukhula.
Iintakumba azihlali zibangela ukucaphukisa iindwendwe, kodwa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba zingasasaza izifo, ezinje isibetho sebubonic okanye typhus. Ikati izenze, ogama lakhe lezenzululwazi IiCtenocephalides felisUkongeza, inokuhambisa ifayile ye- ndinayo.
Banokubangela ukungonwabi okungaphezulu kwesinye kubahlobo bethu. Izifo ezinokudluliselwa kwiikati zi:
Ifilimuzii-nematode ezichaphazela izicwili ezingaphantsi kunye nentliziyo; enyanisweni yaziwa ngegama 'lesifo sentliziyo'. Iimpawu zezi: ukukhohlela okungapheliyo, ingxaki yokuphefumla ngokwesiqhelo, ukungakuthandi ukutya, kunye nokungabi noluhlu Ukuba ayinyangwa ngexesha, kuya kufuneka ingenelele.
IHemoplasmosis: ziibhaktheriya ezichaphazela inkqubo yemithambo. Iikati ezosulelekileyo azizukufumana luhlu, zizinciphise umzimba, zibe nefiva, kwaye kwiimeko ezinzima zibe neanorexia.
IDipylidiosis: sisidleleli samathumbu esaziwa njenge tapeworm. Ihlala emathunjini ekati kwaye itya oko ikutyayo. Akukho zimpawu zibalulekileyo, ngaphandle kokurhawuzelelwa ezimpundu okuya kukunyanzela ukuba uhlale phantsi kwaye ukhase phantsi.
Intakumba yokuluma i-Allergic Dermatitis (FAD): Sisifo esibi esine esincinci, kodwa esiqhelekileyo. Impendulo ivela xa intakumba ifunxa igazi lekati, eliya kuqala ukurhawuzelela kwaye indawo echaphazelekayo iya kudumba, ibomvu ngombala. Ukongeza, uya kubona ukuba ikho njani amaxesha ngamaxesha kunye nokukrwela ukuzama ukukhulula ukurhawuzelela. Xa sinesibetho esihambileyo, siya kubona ukuba kukho iindawo ezingenaboya emzimbeni wesilwanyana.
Ndingazi njani ukuba ikati yam inentakumba?
Ikati eneentakumba iya kujika ibe sisilwanyana esinokuba luvalo, singonwabi, kwaye sibe ndlongondlongo xa usulelo luqhubele phambili kakhulu. Kodwa umqondiso wokuqala oya kuthi usixelele ukuba unayo uya kuchitha ixesha ekrwela. Ungayenza ngamandla amakhulu, enokubangela amanxeba ngamanye amaxesha kwindawo echaphazelekayo.
Indlela esebenzayo nekhawulezayo yokukwazi ukuba inayo kukudlulisa ikama ngokuphakamisa iinwele zayo. Ukuba ubona amachaphaza amenyezelayo mnyama emqolo, ngasemva kweendlebe zakhe, emazantsi omsila wakhe okanye esiswini sakhe, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokumbulala.
Uthintelo lweFlea kwiikati
Kuba akukho mntu ufuna ukuba neentakumba ekhayeni lakhe kwaye ikati yakhe ayifanelanga ukuba ihlupheke, eyona nto sinokuyenza ukubathintela. Njani? Ewe, zimbini iindlela: ngemichiza y indalo.
Imichiza yokubulala izinambuzane yokulwa iintakumba kwiikati
Kwiivenkile zezilwanyana nakwiklinikhi yezilwanyana uya kuyithengisa iipayipi ezichasene neparasitic, iikhola, iipilisi kunye nezitshizi. Inye nganye inezibonelelo zayo kunye neengxaki zayo, ngoko ke siza kubona ngokweenkcukacha ngokwahlukileyo:
Kulula kakhulu ukufaka isicelo, ukuba ikati ayoyiki 🙂. Isilwanyana sibanjwa ngononophelo kodwa siqinile, iinwele zahlulwe entanyeni (ngasemva), kwaye imveliso iyasetyenziswa. Banokusebenza kwenyanga enye, kwaye inyani yile ziluncedo kakhulu, ngakumbi xa uphumela ngaphandle.
Nangona kunjalo, Lumka ungayibeki kwindawo enokufikelelwa kuyo, kuba kungenjalo unokunxila.
Iikhola zinexabiso eliphantsi kunee-pipettes, kwaye kuyacetyiswa kakhulu xa sifuna ukuqiniseka ukuba ikati yethu ayizukubamba ngalo lonke ixesha esiya kwipatiyo. Ziyasebenza kwinyanga enye, ke ubuncinci iiveki ezi-4 sinako ukuzola.
Ingxaki izakuvela ukuba siyayekela ngaphandle. Amaxesha amaninzi le migexo ayinalo ukhuseleko, kwaye ukuba uyarhintyelwa ... Ndiza kuba neengxaki ezininzi. Ke, ukuba uyayiyeka ihambe, qiniseka ukuba uthenga isacholo somqala ngolu hlobo lwe-clasp.
Iipilisi zisetyenziswa ngokubanzi njengendawo 'yokugqibela'. Xa ukwanda kweentakumba kubalulekile, okanye ukuba uhlala uninzi, Iipilisi ziya kukunceda uphile ubomi obunokuthula, ngaphandle kokuzikhathaza ngakumbi ngezi ntsholongwane. Iziphumo zalo zinokuhlala ukusuka kwi-1 ukuya kwi-3 okanye kwiinyanga ezi-6 kuxhomekeke kweyiphi oyinika yona.
Ewe, ungaze unike umhlobo wakho ngaphandle kwemvume yogqirha wezilwanyananjengoko inokubangela ukusabela okungafunekiyo kunye nokusongela ubomi.
Isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokukhulela, kwiindawo zokuhlala izilwanyana nakwabakhuseli ngokusebenza kwayo kunye neendleko eziphantsi. Lukhetho oluhle kakhulu xa sifuna ukugcina imali encinci, kwaye sigcine ikati izikhululekile.
Kodwa ... (yonke into inayo kodwa), Lumka kakhulu ngamehlo, impumlo, umlomo kunye neendlebeNgaphandle koko kuya kufuneka simse kugqirha wezilwanyana ukuze asivavanye.
Okwethutyana ngoku, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukufumana izinto zokubulala izinambuzane ezingabangeli ngxaki kwizilwanyana. Imigexo yomqala, iipipettes, izifafazi ... ezenziwa ngendlela efanayo neekhemikhali, kodwa zahlukile kuzo ngokwendalo, oko kukuthi, Nokuba ikati yakho ikhotha into engamanzi kumbhobho wendalo, akukho nto inokwenzeka kuye.
Yeyona ndlela ilungileyo yeekati ezinesondo, kunye nabo bahlala ekhaya imini yonke. Iziphene kuphela ezo ukusebenza kwayo kuhlala kancinciUnyango kufuneka luphindaphindwe rhoqo (ngesiqhelo, kube kanye kwiintsuku ezili-15), kwaye ukuba uboya buya ngaphandle abadli ngokuba luncedo kakhulu. Kodwa azibizi kakhulu, kwaye inyani kukuba kufanelekile ukuzama.
Okwangoku, ukuba awufuni kuchitha imali kwaye ukhetha ukwenza izinambuzane zakho zendalo ekhaya, Apha unamayeza ahlukileyo kwiintakumba.
Unyango lwasekhaya lweentakumba kwiikati
Ezi zifunxi-gazi azilithandi kwaphela ivumba lelamuni. Sika ilamuni kwizilayi kwaye ubazise emathunjini. Bayeke bahlale ubusuku bonke, ngengomso, ngelaphu okanye ngesiponji, bahlambe ikati yakho.
Ucebile kwi-vitamin B1, iya kugcina iintakumba kude nekati yakho. Yongeza icephe elincinci ulidibanise nokutya kwakho kwesiqhelo yonke imihla, kwaye ungatsho kwi-parasites ezibandayo ngonaphakade.
Iti yomthi ioyile ebalulekileyo
Lelinye lawona malungiselelo endalo asebenzayo ngokuchasene neentakumba kwiikati, kwaye kulula ukuyisebenzisa. Fumana isitshizi seoyile yomthi weti, kwaye kuya kufuneka uyitshize ikati yakho ukunqanda ukudibana namehlo, impumlo, umlomo kunye neendlebe.
Ngaba uyazi ukuba i-chamomile tea igxotha iintakumba? Akunjalo? Yenza ukumnika kwaye kamsinya nje ukuba amanzi afudumele, nyakamisa isiponji okanye ilaphu kuyo kwaye usule ngaphezulu komzimba wesilwanyana.
Iintakumba zizifunxi-gazi ekufuneka ndijongane nazo unyaka nonyaka. Andiphelelanga ekukhuseleni iikati zam, kodwa nezinja zam. Ndikhumbula unyaka omnye, ngo-2010 okanye njalo, sasinesifo esibuhlungu ekhaya. Lelinye lawona mava amabi ebomini bam. Kwakufuneka sihlambe onke amashiti, amalaphu etafile, iimpahla…, sikhuhle phantsi isibulali zinambuzane yonke imihla. Ngapha koko, ngethamsanqa bekungekho sidingo sokubiza inkonzo yokulawula izinambuzane, kodwa iipipettes endizibeke kwiikati bezingasebenzi kakuhle ngelo xesha.
Kule vidiyo uya kuyazi indlela yokuphelisa iintakumba ezinokuba sekhaya zisebenzisa amayeza asekhaya:
Andinakutsho ukuba izinambuzane zendalo okanye zemichiza zingcono ekulweni iintakumba kwiikati. Kuxhomekeka kakhulu ekubeni isilwanyana sihlala phi kwaye sivunyelwe ukuba siphume phandle. Kwimeko yam, andinakukhetha ngaphandle kokubeka iipipettes zamachiza kubo, kuba xa bephuma ngaphandle, ezendalo azibancedi kakhulu xa besentsimini. Kodwa ukuba uboya bakho buya kuhlala busekhaya, ingcebiso yam yile yenze ibe yendaloNgale ndlela, uyakuphepha ukuthatha umngcipheko ngokungeyomfuneko.
Nokuba yeyiphi imveliso oyikhethayo, kubalulekile ukuba buza ugqirha wezilwanyana ngengcebiso Kuba iyayazi imbali yezikati yakho kwaye uya kuba nakho ukukuxelela ukuba yeyiphi eya kufaneleka kakhulu kuye.
Akukho mntu ufuna ukubona iintakumba kwiikati, kodwa asinakukhetha ngaphandle koko sithwale kangangoko sinako, nokuba ngamayeza okubulala izinambuzane, okanye ukulungiselela amayeza ethu ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Izifo » Iintakumba kwiikati
Ndiyabathanda bam baneminyaka emibini ubudala. Ndibeke ishampu yentsetse kunye nefray spray.Ndinayo enye akazivumeli ukuba ahlambe.Ndimnika imox yokutya.
Ukwazi njani ukuba ikati yam ineparvovirus
Ngaba ucinga ukuba uyazi yonke into malunga neekati ezimnyama? Masikothuse